‘Yaa marqaa, si afuufuun si liqimsuufi’ jedhani? Kun OSA faarsuu natti hin – Kichuu
‘Yaa marqaa, si afuufuun si liqimsuufi’ jedhani? Kun OSA faarsuu natti hin fakkaatu. ‘OSAf tumsa uumna’ jechuun qabanii masaanuu OSA kan dantaa Wayyaanee/EPRDFiif hojjetu biyya keessatti hundeessuun Oromoo afanfaajjessuuf akka hin taane. Yoo dhuguma OSAdhaaf quudhan akka waldichi biyya keessa seenee hojii qorannoo hegeree Oromoo fi Oromiyaa milkeessu bilisummaan hojjetu hayyamuufii dha. Faaynaansii fi dhiheessiilee birootiin cinaa dhaabbachuu dha. Yoo kana gootan qofa isin amanna. ”Yaa harree sin amanu, madaadhaan gangalattee dhukkubbii dabalattaa” jedhe Eebbisaa Addunyaa.
OSA hajack by OPDO (TPLF)
PROFESSOR HISQEEL (Pirezedaantii OSA biyya alaa) Vs Dooktar Abiy Ahimad (Pirezedaantii OSA biyya keessaa). OSA Vs OSA
—————— – – – – – – — – – – – – –
1. Waldaan Qorannoo Oromoo biyya Amarikaa kana keessaatti waggaa 31ffaasaa dhihoo kanatti Washington DC tti akka kabajatu quba qabna. Yeruma kanattimmoo FBC’dhaanis OSA’n akka geggeeffamaa jiru kaayyoosaa faana ifa kan godhate (Hidhaa gadii ilaali) geggeeffamaa akka jiru argaa jirra. Damee isa alaa kanatu Afaan Oromoon biyya keessa galemoo? Yoo akkana ta’emmoo akkamiin OSA’n mootummaa Wayyaanee jalatti geggeeffamaa jiru sun isa gamanaa eenyummaa Oromoo gadi fageenyaan qoratu kana faana walkiphe?
2. Waa’een qorannoo OSA kan biyya keessa jiru kanaa xiyyeeffannoonsaa maali? keessumattuu kan Dooktar Abiy Ahimad irratti dalagaa jiruufi miidiyaan ifa ta’e kun Waajjira aadaafi Turizimii Oromiyaa faana quba qabaa? Qorannoon dhimma Oromoo kun sirna sana keessatti bilisummaansaa hagam gaha?
3. OSA’n kun Alattis ta’u Keessatti dhimma Oromoo kan qoratu taanaan Afaan Oromootiin dhaloota qubee bira bu’aan qorannoo kun akka ga’uuf maaltu dalgame? keessumattuu qorannoowwan jajjaboon ala kanatti raawwatamaa jiran kunneen manneen barnootaa biyya oromiyaa hundumaa keessa galanii carraa ittiin dubbifamaa jiranirratti hagam ga’u? Biyya keessatti Yunivarsiitiifi kolleejjiiwwan kitaabota qorannoo jildii hedduurraa gahan kana hagam isaanii qaba? Isa hojjetamee jiru kanas koree itti godhamuun gara Afaan oromootti jijjiiruudhaan Afaan lamaan biyya keessatti dhiheessuudhaaf gama hayyoota ala kana jiraniitiin waan yaadame jira laataa?
4. Qabiyyee OSA biyya alaa kanaa namuma lamaaf sadiitu gara barbaadetti waan oofaa jiru fakkaata. Keessumattuu ogummaawwan toora Saayinsiifi Takinooloojii, Fayyaa, Qonnaa, Daldalaafi dinagdeefi kkf keessatti aammatamanii hinjiran? Tarii dhimmootiin akkanaa kun Oromoof yoo qoratamanii dhihaatan badii qabu laataa? Irratti haayaadamuufani, Saayinstistonni Oromoo copha sammuu isaanii dhimmisuu qabuufan jedhe.
5. Dhumarratti hariiroon harka wayyaa jalaatiin alaaf keessatti dalagamaa jirtu kun qollishee irraa baatee utuu saba Oromootiif ifa taatee jechuun ‘TAAJJABBII’n dhaamsa dabarfateera. Akkuma bekamu Taajjabbii’n waan saba Oromoo keessatti qulqullaa’uufi ifa ta’uu qabu diinqa kamiiyyuu seenuun dhiheessuutiin beekama.
Viva: Chali Ensermu
Pirof. Asaffaa Jaal’ataa: ‘Ummatni Oromoo hir’ina jaarmiyaa hawaasaa fi siyaasaa qaba’